Umkhiqizi wefektri we-Positive Pressure ohlakaniphile ohamba phambili we-Intelligent Explosion-proof UTaiyi
Imodeli TY / PXK100-1
Ukumaka kwe-Ex I-ExP dm ia II BT4 = II 2G ExP dm ia IIBT4
IP Ibanga IP65 / IP66
Ukucindezela Komoya 0.2-1.0
Ukusebenza Voltage 80-1000
. B 高 H 厚 H Cavity umgodi omkhulu） 高 H Usayizi Wokufaka
1 500 800 220 600 Kwenziwe ngentando
Umkhiqizo usebenzisa uhlaka lwekhabethe lokusabalalisa amandla lwe-GGD, usebenzisa isakhiwo sephaneli esikhulu nesizayo, lonke ikhabethe lifaka uhlelo lokungenisa umoya, uhlelo lokuzwa ingcindezi, uhlelo lokulawula okuzenzakalelayo, uhlelo lokungenisa umoya, uhlelo lokulinganisa nohlelo lukagesi.
Umkhiqizo ungafakwa ngezinsimbi zokuthola, izinsimbi zokuhlaziya, izinsimbi zokubonisa, izinto zikagesi ezinamandla kagesi aphansi, iziguquli zamavolontiya, iziqalo ezithambile noma amasistimu wokulawula amakhompyutha, angasetshenziswa njengezinhlelo zokucubungula amasiginali aphakathi nezinhlelo zokulawula ezimaphakathi.
Idivayisi yokuvikela iphelele. IKhabinethi yokulawula ifakwe umshini wokuxhuma wokungenisa umoya nowokulethwa. Kuphela ngemuva kokufinyelelwa kwesikhathi sokungenisa umoya, amandla angathunyelwa nge-othomathikhi, futhi kune-alamu ezenzakalelayo ene-low-othomathikhi nedivayisi yokuphakela othomathikhi, nomsebenzi we-air-off othomathikhi ophezulu.
Ukusebenza kokubeka uphawu kunokwethenjelwa, igobolondo lamukela ukuvikelwa okuningi kokufakwa uphawu, isikhathi sokubamba ingcindezi side, futhi izindleko zokusebenza ziyagcinwa.
IKhabhinethi isebenzisa ifomu lokufaka umsele wekhebula, futhi umsebenzisi udinga ukufakelwa umthombo wegesi ohlanzekile noma ongenalutho.
Amayunithi amaningi angafakwa eceleni bese asebenza ku-inthanethi.
Lapho enza, umsebenzisi udinga ukuhlinzeka ngomdwebo ophelele wesistimu kagesi nohlu lwezinto ezakhelwe ngaphakathi.
Le yikhabethe lethu lokusabalalisa amandla lokuqhuma kwamandla lokucindezela elinamandla, elinesistimu yokulawula okuzenzakalelayo, nomsebenzi owengeziwe we-low-voltage interlock, othuthukisa ukuphepha nokusebenza komkhiqizo. Kungumkhiqizo okufanele ube nawo embonini kagesi namakhemikhali.
Langaphambilini YT / YZ / GZ IP54 1/3/4/5 pin 250v / 400v Explosion Proof Socket and Plug
Olandelayo: Ibhokisi Lokulawulwa Kukagesi Eliqokiwe elenziwe ngokwezifiso
IKhabhinethi Yokusabalalisa Ubufakazi Obucindezelayo
Kwenziwe ngentando Electronic Uphiko Explosion-ubufakazi ...